OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro: nyocha miri emi | Gam akporosis
OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro: nyocha miri emi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ụlọ ọrụ OnePlus bịara mara na ahịa na OnePlus One, ọnụahịa akụ na ụba yana uru kachasị mma nke oge aAsianlọ ọrụ Asia a na-ebupụta ụdị ọhụrụ na ahịa, ihe dị ka ọnwa isii ọ bụla. Ọhụrụ ọ bụla ọ bụghị naanị na-abawanye ọnụahịa ntakịrị, kamakwa uru (ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile).
Agbanyeghị, ọ dị ka afọ a ọ chọrọ ịbanye na ngalaba dị elu, nke ndị mmadụ na-emefu nnukwu ego na ama. N'afọ a, nzọ OnePlus bụ ọnụ abụọ: OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro. Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, ụdị Pro, na mgbakwunye na nke dị oke ọnụ, na-enye anyị usoro atụmatụ nke gosipụtara ọnụahịa ya. Lee, anyị gosiri gị a ntule n'etiti OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro.
1 Tebụl ntụnyere OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro
2 AMOLED ihuenyo maka onye ọ bụla
3 Ọ bụghị ụdị ọ bụla
4 Ngalaba foto
5 Ike na arụmọrụ nke OnePlus 7
6 OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro ahịa
7 AKW BKWỌ abụọ buru ibu dabere n'otú ị si ele ya anya
8 Gịnị OnePlus ka m zụrụ?
Tebụl ntụnyere OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro
Enweghi uzo ozo kariri nke oma iji lelee nke bu ihe di iche n'etiti uzo abuo karie site na tebụl. Na tebụl a ị nwere ike ịhụ ngwa ngwa nke bụ isi ọdịiche dị n'etiti OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro, ọdịiche anyị na-akọwa n'okpuru.
Ihuenyo AMOLED 6.41 sentimita - Mkpebi 2.340 × 1.080 - 402 dpi - Nwee ume ọhụrụ 90 Hz AMOLED 6.67 sentimita asatọ - Mkpebi 3.120 x 1.440 - 516 dpi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 855
Eserese Adreno 640 Adreno 640
Ebe nchekwa RAM 6/8 GB ụdị LPDDR4X 6/8/12 GB ụdị LPDDR4X
Nchekwa ime 128/256 GG 128 / 256 GB
Unkpọghe nhọrọ Ihe ntanetị ihe ntanetị na ihuenyo - Nchọpụta ihu Ihe ntanetị ihe ntanetị na ihuenyo - Nchọpụta ihu
Rear igwefoto Ngwa anya stabilizer - Isi 48 mpx f / 1.7 - Secondary 5 mpx f / 2.4 Ngwa anya stabilizer - Isi 48 mpx f / 1.6 - Ekwenti 3x 8 mpx f2.4 - Wide n'akuku 16 mpx f / 2.2 117 nke elele
Igwefoto n'ihu 16 mpx f / 2.0 na ntinye elektrọnik 16 mpx f / 2.0 na ntinye elektrọnik
Usoro njikwa OxygenOS dabere na gam akporo 9 OxygenOS dabere na gam akporo 9
Batrị 3.700 mAh na nkwado ngwa ngwa 4.000 mAh na nkwado ngwa ngwa
Ibu ibu 182 grams 206 grams
Akụkụ 157.7 × 74.8 × 8.2 mm 162.6 × 75.9 × 8.8 mm
Agba Mirror Grey Almọnd / Grey na-acha anụnụ anụnụ / Nebula Blue
Audio Nkwupụta Stereo - Dolby Atmos Nkwupụta Stereo - Dolby Atmos
Ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.1 ụdị C USB 3.1 ụdị C
Ahịa site na euro 559 709 euro
AMOLED ihuenyo maka onye ọ bụla
Ihuenyo na teknụzụ AMOLED na-enye anyị usoro nke uru ndị anyị kwurula na ọtụtụ oge, nke kachasị mma bụ nke ahụ na-enye anyị ohere ịchekwa batrị mgbe anyị jiri agba ojii kpamkpam. Site na mwepụta nke gam akporo Q, Google ekwenyelarị na ụdị nke gam akporo ọzọ ga-emejuputa ọnọdụ gbara ọchịchịrị, ọnọdụ ga-adị na ngwa niile nke ọchụchọ ọchụchọ.
Onye OnePlus 7 Pro abụghị naanị na-enye anyị ihu ọhụụ dị egwu na-enweghị ụdị ọkwa ọ bụla, kamakwa na-enye anyị ume ume nke 90 Hz, ọnụego ume ọhụrụ nke na-enye anyị nnukwu mmiri na nghọta karịa mgbe anyị na-agbagharị ngwa ngwa mana ọ ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu ndị kachasị achọ n'ụzọ dị omimi na nke ọhụụ.
OnePlus na-etu ọnụ na ụdị 7 Pro bụ nke mbụ iji mejuputa ngosipụta na ọnụego ume nke 90HZ, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa, ebe ọ bụ na-enweghị ịga n'ihu, ekwentị Razer na-enye anyị ọnụọgụ ume ka elu, 120 Hz na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, mgbe ọgbọ mbụ nke ekwentị a.
Ọ bụghị ụdị ọ bụla
Isi ihe mmado nke enyere OnePlus 7 Pro dị na ihuenyo, ihuenyo nke na-ekpuchi ihe niile n'ihu ngwaọrụ, gụnyere akụkụ ya, belụsọ obere mpaghara na ala. Nzube a apụtaghị na ọ nweghị igwefoto n'ihu, ebe ọ bụ na ọ dị n'akụkụ elu nke ọnụ ahịa ahụ ma nwee ike iweghachi, ya bụ, ọ na-apụta ma na-apụ n'anya dị ka mkpa anyị si dị.
Nsogbu nke nke a nwere ike ịmepụta bụ ma ọ bụrụ na njedebe ahụ adaba, mana maka nsogbu ọ bụla enwere ngwọta. Dị ka onye nrụpụta si kwuo, ọrụ nke igwefoto nwere ike ịdọrọ na accelerometer, accelerometer na ọ bụrụ na ọ chọpụta na ọnụ ya dara, ọ ga-ezo ngwa ngwa igwefoto ngwa ngwa ka ọ ghara ịgbaji.
Ha niile mara mma na mbụ. Mana ọ bụ usoro, usoro ihe eji eme ka ọ gafee oge ọ nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ n'ihi ntinye nke ájá ma ọ bụ ụdị unyi ọ bụla ọzọ. Ma ọ bụ ọ nwere ike ịkwụsị iji ya.
The OnePlus 7 maka akụkụ ya, na-enye anyị a imewe yiri nnọọ ka ọgbọ gara aga, na mpempe akwụkwọ anya mmiri n'ihu ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị jiri mmata ihu iji mepee ọnụ, ihe nlele a ga - enyere gị aka ịnweta ọnụ ọsọ ọsọ na - enweghị ichere maka modulu ihu nke usoro Pro ịpụta.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị nrụpụta na-ekwusi ike na ama ụfọdụ ga-eji dochie ese foto SLR (nzuzu zuru oke), ọ dabara nke ọma maka onye ọrụ ha nọgidere na-emeziwanye ngalaba a kwa afọ na njedebe ha, ebe ọ bụ na smartphone ahụ aghọwo ngwaọrụ kachasị iji were ụdị foto ma ọ bụ vidiyo ọ bụla, gụnyere ihe omume pụrụ iche, ọkachasị maka nkasi obi ọ na-enye anyị.
Onye OnePlus 7 Pro họrọ soro usoro ahịa ma jikọta igwefoto 3 n'azụ. Onye isi na-enye anyị mkpebi nke 48 mpx, na-esote lens telephoto 8 mpx na ntinye 3x na nke ikpeazụ bụ 16 mpx n'obosara anya na nlele nlele nke 117 degrees.
Maka akụkụ ya, nke OnePlus 7 na-enye anyị, dị ka onye bu ya ụzọ, 2 ese foto na azụ, onye bụ isi bụ otu na anyị nwere ike ịchọta na ụdị Pro na 48 mpx nke mkpebi na nke abụọ nke 5 mpx.
Ike na arụmọrụ nke OnePlus 7
Ihe ọhụrụ OnePlus 7 na 7 Pro na-achịkwa ya Ihe nhazi ọhụrụ nke Qualcomm, Snapdragon 855. Agbanyeghị, n'ime ọnụ na iji nyere aka jikwaa sistemụ arụmọrụ, anyị na-ahụ nsụgharị dị iche iche. N'otu aka, ma OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro dị na nsụgharị nke 6 GB nke Ram na 128 GB nchekwa na 8 GB nke Ram na 128 GB nchekwa.
Prodị Pro dịkwa na ihe nchekwa 12 GB nke RAM na nchekwa 256 GB. Na mgbakwunye, ọ dị naanị na otu n'ime agba atọ nke usoro Pro dị, ebe OnePlus 7 dị naanị na Mirror Gray color, ọ bụ ezie na ụdị na-acha ọbara ọbara ga-abata India na China.
Ma ọnụ ẹkedori a usoro nke 10 oyi akwa mmiri jụrụ nke na - egbochi okpomọkụ nke ekwentị, ọ bụrụgodị na anyị na - eji ike niile ọ na - enye anyị.
OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro ahịa
Dịka anyị nwere ike ịhụ na tebụl dị n'elu, ọnụahịa mmalite nke OnePlus 7 maka ụdị nke OnePlus 7 na-amalite na euro 559, ebe ụdị nke OnePlus 7 bụ euro 709.
OnePlus 7 6 GB Ram + 128 GB nchekwa 559 euro Mirror Grey
OnePlus 7 8 GB Ram + 256 GB nchekwa 609 euro Mirror Grey
OnePlus 7 Pro 6 GB Ram + 128 GB nchekwa 709 euro Mirror Grey
OnePlus 7 Pro 8 GB Ram + 256 GB nchekwa 759 euro Mirror Grey - Nebula Blue - Almọnd
OnePlus 7 Pro 12 GB Ram + 256 GB nchekwa 829 euro nebula acha anụnụ anụnụ
AKW BKWỌ abụọ buru ibu dabere n'otú ị si ele ya anya
Ihe niile dị na OnePlus, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ malitere ihe nlereanya mbụ, enyebeghị nkwado mmiri kwadoro na mmiri na njedebe ya, asambodo IP nke ọtụtụ njedebe kachasị elu anyị nwere ike ịchọta n'ahịa na-enye anyị. Asambodo IPxx na-emesi anyị obi ike na ọnụ anyị na-eguzogide ọnụ ọgụgụ nke asambodo ọ nwetara. Ihe kachasịkarị bụ IP68, asambodo nke na-emesi anyị obi ike na ọ bụrụ na ọnụ ya adaba na mmiri A gaghị emebi ya site na ntinye nke mmiri mmiri.
Ọzọ nke ukwuu ma ọ bụ na ọ naghị enye anyị usoro ikuku na-akwụ ụgwọ. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ na-emesi obi ike na ụdị ibu a dị nwayọ nwayọ. Iji kwụọ ụgwọ maka nwayọ nwayọ a, onye nrụpụta na-enye anyị sistemu na - acha ọsịsọ na-enye anyị ohere ibudata ọnụ na ihe karịrị otu elekere. N'ihi ya, anya ọma.
Ikuku ikuku na-enye anyị ohere idowe ọnụ ya n'elu chaja ka enwere ike ịgba ya n'ejighị eriri. Ọ bụ ezie na ọ dị nwayọ karịa sistemu na-akwụ ụgwọ wired (nke nwere eriri) n'abalị, anyị nwere oge karịa iji kwụọ ya na ọsọ ị chọrọ, ebe ọ bụ na anyị anaghị ezube ịpụ awa ole na ole. Ọdịmma nke enweghị ịchọ eriri Ibuba ọnụ bụ ihe na mgbe iji ya mara gị achọghị ịlaghachi na usoro ọdịnala.
Gịnị OnePlus ka m zụrụ?
Na mbu, ma dika o si di na mbu, ha nile dabere na mmefu ego. Prodị Pro nke OnePlus na ha nwere ọdịiche ma e jiri ya tụnyere nke kacha nke euro 150, dị ka anyị pụrụ ịhụ na aga na ngalaba. Ọ bụrụ na ị nwere euro 150 ndị ọzọ ma ị maghị ihe ị ga-eme ha, ụdị Pro bụ nhọrọ magburu onwe ya ịtụle, ọ bụrụ na ị doro anya na ị na-aga maka OnePlus ọhụrụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịbanyebeghị n'ihe OnyePlus na-anọchi anya ya, ugbu a Ọ bụ ohere magburu onwe ya ijide ụdị nke gara aga, OnePlus 6T, ihe nlereanya nke na-ekerịta ọtụtụ atụmatụ na onye ọhụrụ OnePlus 7 ma e wezụga maka processor, nke bụ isi ihe dị iche. Enwere ike ịchọta ihe nlere a na Amazon na Ebay maka ihe dị ka euro 500.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro: nyocha miri emi
Ngwọta maka nsogbu na ọkwa na Xiaomi na Notch